पैसाबाट पैसा बनाउने भन्दै दिउँसै ठगी ! दुई 'जादुगर ठग' को तिकडम देखेर प्रहरी पनि छक्क !
काठमाडौँ- प्रहरीले काठमाडौँबाट अजिव ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ गरेको छ। सक्कली पैसाबाट अर्को सक्कली नै पैसा बनाउने भन्दै ठगी गर्दै आएका दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ पर्नेहरुमा म्याग्दी ओखरबोटका ५२ वर्षीय भीमबहादुर मल्ल र ओखलढुंगा दियालेका ४४ वर्षीय मानबहादुर सुवेदी रहेका छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार उनीहरुलाई सोमबार दिउँसो पक्राउ गरिएको हो।
सादा कागजबाट सक्कली नेपाली नोट बनाएको भन्दै सोझा सर्वसाधारणहरुलाई ठग्दै आएका थिए। काठमाडौंमा दिउँसै ठगी गर्ने उनीहरुको तिकडम देखेर जो-कोहि पनि छक्क पर्न सक्छ।
खाली कागज, बेटालिन र अन्य केमिकल प्रयोग गरेर पैसा बनाउने भन्दै उनीहरुले सर्वसाधारणहरुको आँखा छल्ने गरेका प्रहरीले जनाएको छ। मात्रै कागजको बन्डललाई बाहिर पहेँलो कागजले प्याक गरी उनीहरुले ठगी गर्ने गरेका थिए। ठगीनेहरुलाई थाहा नहोस भन्नको लागि उनीहरुले,”‘प्रहरीले थाहा पाउँछन् यहाँ नोखल्नु” समेत भन्ने गरेको खुल्न आएको छ।
यस भन्दा अगाडी सक्कली नोटको बीचमा नक्कली नोट हालेर ठगी गरेको पाइएको भएता पनि यसरी खाली कागज दिएर ठगी गरेको पहिला भेटिएको थिएन।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार पक्राउ परेका दुवै जना पेसेवर ठगहरु रहेका छन्। उनीहरु यस भन्दा अगाडी पनि ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका थिए।
पक्राउ परेका दुवै विरुद्ध प्रहरीले ठगी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
प्रकाशित : सोमबार, चैत ०४, २०७५१७:०३
निर्माण सामग्री बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा एकै गाउँका ४ जना घाइते , एकको मृत्यु !